Conspiracy - Sandal shaped jewels- Kiraro Lafo - Famolavolana
Conspiracy - Sandal shaped jewels-
Alarobia 18 Mey 2022
Kiraro Lafo Gianluca Tamburini ny tsipika «firavaka volafotsy» sy antsoina hoe Conspiracy, dia naorina tamin'ny taona 2010. Ny kiraro Conspiracy dia mazoto mitambatra haitao teknolojia sy aesthetika. Ireo kiraro sy solosim-bolo dia vita amin'ny fitaovana toy ny alluminium maivana sy ny titanium, izay ariana amin'ny endrika sokitra. Ny silhouette amin'ny kiraro dia avy eo asongadin'ny vato semi / sarobidy sy embellishments mahafinaritra. Ny teknolojia avo lenta sy ny fitaovana manasaraka dia mamorona sary sokitra maoderina, manana endrika endrika kapa, fa eo kosa no hita ny fahatsapana sy ny fanandramana ny asa tanana italiana.
Anaran'ny tetikasa : Conspiracy - Sandal shaped jewels-, Anaran'ny mpamorona : Gianluca Tamburini, Anaran'ny mpanjifa : Conspiracy by Gianluca Tamburini.
Ity endrika tsy manam-paharoa ity dia mpandresy amin'ny lokan'ny famolavolana platinum amin'ny fifaninanana lalao, kilalao ary famolavolana vokatra fialamboly.	Tokony ho hitanao tokoa ny portfolio-n'ny endrika mpamorona mari-pankasitrahana platinum hahitanao kilalao vaovao, fanavaozana, tany am-boalohany ary famoronana, kilalao ary fialamboly vokatra fialam-boly maro hafa.
Famolavolana kiraro, kiraro sy baoty
CATINO Ny Fanangonana Efitrano Fandroana Alarobia 18 Mey
Temple Mofomamy Mofomamy Talata 17 Mey
calendar 2013 “Module” Kalandrie Alatsinainy 16 Mey
Fanadihadihana famolavolana ny andro Alarobia 18 Mey
Tantara momba ny andro Talata 17 Mey
Famolavolana ny andro Alatsinainy 16 Mey
Mpamorona ny andro Alahady 15 Mey
Ekipa mpamorona ny andro Asabotsy 14 Mey
Kiraro Lafo Gianluca Tamburini Conspiracy - Sandal shaped jewels-